Chinovhara wokudhinda anoshanda - China Changzhou Plet Printing
Chinovhara aidhinda kushanda musimboti sumo -
1. Plane sandara chinovhara wokudhinda mabasa.
1 Plane sikirini wokudhinda vanoshanda kutenderera chirongwa. Kana munhu sandara rasterointi chidzitiro mhando monochromatic Semi-otomatiki chinovhara wokudhinda, mumwe zvayo basa zvinogara zviri: dzichifura → Positioning → kudonha → kusvika ingi ndiro, kudzokera ingi hwendefa → tichibvisa kuti ingi sitiroko → kumuka kuti ingi Plate → anodonha shure ingi ndiro → vachasimudza shanduro → ingi kudzoka sitiroko → kusunungurwa Positioning → kugamuchira.
Ari kuramba kutenderera oparesheni, sokuvapo basa inogona akaziva, nguva inogarwa neimwe chiito inofanira kuva pfupi sezvo zvichiita kuti kupfupisa kushanda neimwe kutenderera uye kuwedzera basa kunyatsoshanda.
3 imprinting mutsetse. Munguva nokudhinda, kuti ingi mundiro uye chinhu chinovhara ndiro vari aimanikidzwa kuumba kuonana mutsetse pakati chidzitiro mundiro uye substrate, unonzi ane rupawo mutsetse. mutsetse Iri kumucheto squeegee uye zvisingaverengeki yevanoda vanoumba anodhinda pamusoro. Zvakaoma kuita dzakanakira NIP nokuti anodhinda ronda chinhu simba muitiro.
3 sikirini wokudhinda anoshanda. Ngatitange yaiwanzoshandiswa ruoko serin'i chinovhara ndege chidzitiro wokudhinda somuenzaniso, nokushanda nheyo chidzitiro wokudhinda anganzi sezvinotevera: simba riri pachishandiswa nokupfuuridzirwa mashandiro, saka kuti ingi squeegee runonditsikirira kuti ingi uye chinovhara kudhinda bwendefa panguva kufamba kuti chidzitiro The mundiro uye substrate fomu ane imprinting mutsetse. Sezvo chidzitiro ane kusawirirana n1 uye N2, uto F2 iri vanowanika pamusoro squeegee, uye kushinga kunokonzera chidzitiro ndiro arege kubata substrate kunze imprinting mutsetse. The ingi iri Under kubata squeegee wacho kudzvinya simba F1, kuti squeegee iri leaked kubva zvinofamba NIP kuti substrate kuburikidza pajira riya.
Munguva nokudhinda, chidzitiro rokudhinda mundiro uye squeegee vanokurudzirwa hama kune mumwe, uye kudzvinya simba F1 uye kushinga F2 vari kuzununguswa synchronously. Under Zvakaitwa kushinga, chidzitiro yadzoswa kuonana pamwe substrate panguva tisagunzvana. Rabva tsvina. Ndiko, panguva mbonje rokudhinda, chidzitiro iri kuramba akaremara uye kuwedzera ukoshi.
Mushure squeegee rinopedzisa mashoko unidirectional kudhinda, kuti squeegee riri roga kubva substrate pamwechete chinovhara ndiro. Panguva iyoyowo, iyo squeegee iri akadzokera ingi kupedzisa yokudhindira kutenderera. Kure pakati rokumusoro pose substrate uye musana pose chinovhara ndiro pashure ingi kudzokera anonzi chete ndiro kure kana mambure kure, uye kazhinji tinofanira 2-5 mm. Kana ruoko-akadhindwa, kuti worunhare wacho unyanzvi uye noumhizha kupesvedzera paumbwe NIP zvakananga. In tsika, nechidzitiro vaidhinda Makawana yakawanda inokosha ruzivo, izvo zvinogona kupfupikiswa nhanhatu pfungwa, iri, inonzi linearity, dzakafanana kumhanya, angled vakaenzana, kumanikidzwa equalization, zvematongerwo enyika, uye verticality pamusoro squeegee. Nemamwe mashoko, squeegee anofanira ngaatarire mberi panguva kudhinda, uye haigoni kuzununguswa rworudyi uye nokuruboshwe; harigoni kuva zvakasimba asati uye pashure zviri makasimba, uye kunogona kunonoka kana rokutsanya pamberi uye pashure zviri zvakasimba; pakona kuti mafungiro kuti ingi ndiro rinofanira kuchengetwa kugara, uye vainyatsotarisirwa zvinofanira kubhadharwa kuti kukurira kurereka yorusvingo. Zvishoma nezvishoma kuwedzera vanhuwo dambudziko; Kudhinda nevezera zvinofanira kuchengetwa hinifomu; chengeta kure pakati squeegee uye yomukati kurutivi pajira riya puranga yakaenzana; uye uchengete ingi mundiro uye kukonzera tote.
2. Flat sikirini pamusoro wokudhinda mabasa. Flat sikirini pamusoro chidzitiro yokudhinda zvinoreva dzokuongorora kudhinda ane sandara chidzitiro pamusoro cylindrical kana conical penyika. Under zvimwe zvinhu, zvingadarowo kuita chinovhara yokudhinda riri curved hukawanika dzakadai elliptical hukawanika, Drum hukawanika, uye chinhu chakakombama hukawanika.
Dry-mambure curved pamusoro chidzitiro wokudhinda chinhu muchina adopts munhu sandara chidzitiro ndiro kudhinda pamusoro curved pamusoro.
Nheyo sandara chinovhara aidhinda ane curved pamusoro ane chinotenderera kubereka b-akabatana achatsigira C-waMosesi kubereka. Panguva kudhindwa, flat chidzitiro pakudhinda mundiro uye substrate kunoshanda apo squeegee iri mira. The sandara Chidzitiro pakudhinda ndiro riri clamped pamusoro chidzitiro pepuranga uye flat chidzitiro curved chinovhara wokudhinda inofamba pa yunifomu nokukurumidza. The kudhindwa zvinhu yakaiswa pamusoro anotsigira mudziyo rotates nokuda kukweshera chidzitiro ndiro. The mutsetse kumhanya ari curved substrate panguva NIP mutsetse kwakafanana nokumhanya flat chinovhara hwendefa kuona squeegee rokudhinda.
Tichingotarisa, kuti nekusimbisa, nebefu mutsetse anofanira kuva ari kumusoro busbar nechepasi zvokudhinda substrate kuti zviite kuwedzera kure-Web angled uye kuona kudhindwa unhu yacho. Nokuti zvivanakire kuchinja, asi squeegee kazhinji adopts ane chakaderedzwa mutengo angled 60 ° ± 15 °, uye kunodiwa kuti kukwanisa kugadzirisa hunyambiri dhigirii uye kumusoro-uye-pasi divi. Kugadziridzwa mira ndiko nechokwadi kuti kumucheto mutsetse Haibudisi lateral kusuduruka kana kugadzirisa uye pasi, uye nguva dzose aligns pamwe chepamusoro bhazi A; kuti squeegee pamwe wehunyambiri angled 60 ° ± 15 ° rinoshandiswa nechokwadi kuti squeegee angled achiumbwa pashure wehunyambiri kugadzwa. α. In chaizvoizvo kuchinja, kuitira kuti vave nechokwadi kuti ndege chidzitiro pakudhinda mundiro uye pemvura zvokudhinda zvinhu zviri vakanyarara nguva, kuti imprinting mutsetse kungava zvishoma mberi. Zvikurukuru kana substrate dhayamita achiri huru, imprinting mutsetse inofanira iri mberi. The rutsigiro mudziyo nokuti curved kudhinda ndiyo All mhando anokosha mano yakagadzirirwa uye kugadzirwa kunoitwa anoishandisa maererano chigadzirwa zvinodiwa.
Cylindrical midziyo kana conical midziyo inogona kudhindwa necheni mbiri chinotenderera mabheyaringi pamusoro curved pamusoro, ruoko-mhando uye mukombe-mhando the bushing mabheyaringi aine kureba kuti dhayamita nhamba asingasviki 1.5, uye kusanduka nemhango midziyo inogona rinotsigirwa Inflatable namano. The ellipse iri anenge ari chikamu cylindrical pamusoro inogona pa- cylindrical waMosesi.
Nheyo pakudhinda pamusoro pemvura cône iri rinonyanya kufanana nheyo pakudhinda pamusoro pechiso humburumbira. Musiyano uri kwakajeka chimiro chidzitiro zvokudhinda mundiro uye sangano chimiro chidzitiro yokudhinda ndiro. Pakuita chidzitiro pakudhinda hwendefa inoshandiswa penyika kudhinda cône, zvinokosha kutanga kuvhomora zvakaitika maonero pemvura cône, uye kuwana pakati nemauto inobva zvakaitika maonero, uye ipapo sarudza yakakodzera puranga kuti chidzitiro hwendefa.
On a shanduro efgh kuti chinogona kutakura zvachose dzinoshandisa serin'i vatemwe, yokudhindira ndiro zvinoenderana dzinoshandisa chimiro anogadzirwa. Kugadzirisa zvakarurama-angled nedanda shanduro efgh uye kuisa O-akabatana sezvo shanduro dzinoshandisa serin'i. Zvadaro, sezvo pamwe kudhinda pemvura humburumbira, rollers ina anoshandiswa kutsigira substrate pasi ndiro, chipande wakasimba, uye chikwangwani Uchibviswa panzvimbo dzinoshandisa chimiro, uye pose cône ndiro inogona kudhindwa nokutsikirira chipande. Panguva kudhindwa, ari conical kudhinda radzo mutsetse kuonana chidzitiro pakudhinda ndiro pasi imwe squeegee kumanikidzwa; kana chidzitiro pakudhinda hwendefa inofamba yakatambarara kumativi akabatana ari dzinoshandisa serin'i kukura kudhirowa, kudhinda zvinhu zviri zvayaitenderera paguyo synchronously pamusoro anotsigira mudziyo. Sports; ingi pasi kwokudzvinyirira kwomunhu squeegee, kurashikirwa kuna pemvura substrate kupedza rokudhinda.